The Big Bang Theory မှ သရုပ်ဆောင်များ၏ လက်ရှိပုံရိပ်များနှင့် ယခုသူတို့ ဘာလုပ်နေကြသလဲ ? - ONE DAILY MEDIA
Big Bang Theory ကို 2007 ခုနှစ်တွင် စတင်ပြသခဲ့ပြီး 2019 ခုနှစ်တွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပြီး ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်မှာ 14 နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း ယနေ့ထိတိုင် ခေတ်မှီနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ အံ့အားသင့်စရာအသေးစိတ်အချက်တစ်ချက်ကတော့ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာ သရုပ်ဆောင်ရုံမကဘဲ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝကိုပါ တကယ်ပဲ အလေးအနက်ထားခဲ့ကြတာပါ။
(၁) Jim Parsons (Sheldon Cooper
Sheldon Cooper ဇာတ်ရုပ်ကို ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာ မြုပ်နှံထားခဲ့ပြီးနောက်၊ မင်းသား Jim Parsons သည် စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ အဖြစ်အပျက်အချို့ဟာ ဘဝကို နှေးကွေးသွားစေသည့်အချိန်ရောက်ပြီဟု ထင်မြင်လာပြီးနောက် ဇာတ်လမ်းတွဲတွင် ပါဝင်ခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ရှိုးဖန်တီးသူ Chuck Lorre အား ဇာတ်လမ်းတွဲ 12 တွင် ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ်စေခဲ့ပါတယ်။
Parsons သည် The Big Bang Theory တွင် ၎င်း၏သရုပ်ဆောင်မှုအတွက် Emmy Awards လေးဆုရရှိခဲ့ပြီး The Boys in the Band (2020) ရုပ်ရှင်နှင့် အထူးစီးရီးများတွင် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ (၂၀၁၉-၂၀၂၁)တွင် အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ် စာရင်းသွင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
(၂) Kaley Cuoco (Penny)
Kaley Cuoco သည် အသက် 21 နှစ်တွင် စတင်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမ၏ ကာရိုက်တာမှာ ဘေးအိမ်တွင် နေထိုင်သည့် ချစ်စရာ မိန်းကလေးဖြစ်ပြီး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကြီးပြင်းလာပြီး ဘောင်းဘီတိုအစား အနည်းငယ် တင်းကြပ် သောဝတ်စုံများ ၀တ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
2020 ခုနှစ်ကတည်းက ထိုအမေရိကန်မင်းသမီးက The Flight Attendant ဇာတ်လမ်းတွဲတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ် စာရင်းသွင်းခံရကာ သူမ၏ပထမဆုံး Emmy အတွက် ဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူမက သရုပ်ဆောင်လောကထဲကို နှစ် 30 လောက်ဝင်ရောက် ကျင်လည်လာခဲ့ပေမယ့်လည်း ဒီလိုအချိန်မျိုး တစ်ခါမှ မမျှော်လင့်ထားခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
(၃) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler)
Mayim Bialik သည် စီးရီးတွင်ကဲ့သို့ပင် အာရုံကြောသိပ္ပံကို လေ့လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည် ကလေးများ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများနှင့် မိဘများနှင့် ၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးကို အဓိကထားထုတ်ဝေသည့် သူမ၏ပထမဆုံးစာအုပ်ကိုထွက်ရှိခဲ့ပြီးနောက် ရှိူးအစီအစဥ်၏ တတိယတွဲနောက်ဆုံးအပိုင်း 2010 ခုနှစ်တွင် သူမပါဝင်ပြသမှုစတင်ခဲ့ပါတယ်။
လောလောဆယ်တွင် သူမကို Jeopardy! ပဟေဠိရှိုး၏ ဧည့်သည်တော်အဖြစ် တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူမအနေနဲ့ အနုပညာအလုပ်မှာ အထင်ရှားဆုံး အခန်းကဏ္ဍအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားခဲ့ရတဲ့ အခွင့်အရေးရခဲ့လို အရမ်းပျော်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
(၄) Johnny Galecki (Leonard Hofstadter)
Johnny Galecki သည် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော ဇာတ်ကောင်များထဲမှ နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ စီးရီး၏အစောပိုင်းနှစ်များတွင်၊ သူသည် Kaley Cuoco နှင့် ကြည်နူးဖွယ်ရှိခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင်လမ်းခွဲခဲ့သော်လည်းသူငယ်ချင်းများအဖြစ်ဆက်လက်ရှိခဲ့ပါတယ် ။ Leonard Hofstadter အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ပြီးနောက်၊ မင်းသား Johnny Galecki ဟာ 2019 ခုနှစ်တွင်ဖခင်တစ်ဦးအဖြစ် စတင်ခဲ့ပါတယ် ။
(၅) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski)
Bernadette Rostenkowski အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် လူသိများသော Melissa Rauch သည် မင်းသမီး၊ မော်ဒယ်နှင့် လူရွှင်တော်အဖြစ် ရှိုးလုပ်ငန်းလောကတွင် တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။။ တတိယတွဲ စီးရီးတွင်သူမ၏အခန်းကဏ္ဍမပါဝင်မီတွင် The Big Bang Theory audition အတွက်ဖုန်းခေါ် ချိန်အထိ သူမဟာ အလုပ်လက်မဲ့အဖြစ် ရုံးခန်းတွင်ရှိ‌နေခဲ့ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းတွဲပြီးဆုံးပြီးနောက် သူမက ဆက်လက်ရပ်တည်ခဲ့ပြီး သရုပ်ဆောင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမသည် ကလေးငယ်ကင်ဆာရောဂါ ရန်ပုံငွေရှာဖွေရန်အတွက် Oscar’s Kids ဟုခေါ်သော ပရဟိတလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
(၆) Simon Helberg (Howard Wolowitz)
လူရွှင်တော် Simon Helberg သရုပ်ဆောင်ထားသော Howard ဇာတ်ကောင်သည် မင်းသား၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတွက်အသက်ပြန်သွင်းပေးနိုင်သော nerds နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Simon သည် ထက်မြက်သော စန္ဒယားပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဂျက်ဇ်ဂီတကို နှစ်သက်ပါတယ် ။ သူသည် Meryl Streep နှင့်တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သော Florence Foster Jenkins (2016) တွင်အရည်အချင်းများကို ပြသအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
မကြာသေးမီက သူသည် ပြင်သစ်ဂီတရုပ်ရှင် Annette (2021) တွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက ထိုပရောဂျက်မှာ သူရဲ့ပါဝင်မှုအတွက် သူ့ရဲ့အရည်အချင်းတွေအပြင် ထိုအခန်းကဏ္ဍကိုရဖို့အတွက် သူ့နိုင်ငံသားကိုတောင် လိမ်ညာဝံ့တဲ့ထိ စိန်ခေါ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
(၇) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali)
အိန္ဒိယ အနွယ်ဝင်ဖြစ်သည့် Kunal Nayyar သည် ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းများ မစတင်မီ Portland တက္ကသိုလ်တွင် ပညာဆည်းပူးခဲ့ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေရဖို့အတွက် ပြဇာတ်တွေမှာ စတင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဘွဲ့ရပြီး တစ်နှစ်အကြာ The Big Bang Theory (2007) မှာ သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုအခန်းကဏ္ဍကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းတွဲအပြီးမှာတော့ အမည်ဝှက်တစ်ခုလဲ ရရှိခဲ့ပြီး ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သူသည် လက်တွေ့ဘဝဟာ သူသရုပ်ဆောင်ထားသော နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာရှင်ဘဝ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယအလှမယ် Neha Kapur နှင့် လက်ထပ်ထားပါတယ်
(၈) 8. Kate Micucci (Lucy)
Kate Micucci သည် အနုပညာတွင် အထူးပြုလေ့လာထားပြီး ပန်းချီဆွဲခြင်းနှင့် ရုပ်သေးများပြုလုပ်ခြင်းကို စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ပါတယ်။ 2008 ခုနှစ်ကတည်းက သူမဟာ သဲ ရဲတိုက်များ တည်ဆောက်ခြင်းကိုလည်း အာရုံစိုက်ခဲ့ပါတယ် ။ မင်းသမီးအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခြင်းအပြင် မြို့ထဲတွင် ukulele တီးနေတာကိုလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ 2019 နှင့် 2021 ခုနှစ်ကြားတွင် သူမသည် Scooby-Doo နှင့် Guess Who ရုပ်ရှင်တွင် Velma Dinkley ၏အသံသရုပ်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
(၉) Kevin Sussman (Stuart Bloom)
Kevin Sussman သည် သူ၏အနုပညာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် သရုပ်ဆောင်၊ လူရွှင်တော်နှင့် စာရေးဆရာအဖြစ် ကျင်လည်လာခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက Stuart (ရုပ်ပြစာအုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်) အဖြစ် သရုပ်မဆောင်ခင် လက်တွေ့ဘဝမှာ သူက ရုပ်ပြစာအုပ်ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Ugly Betty ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ သူ့ကိုလည်း မှတ်မိနေပါတယ်။ 2022 ခုနှစ်တွင်သူသည် The Dropout စီးရီး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
(၁၀) Sara Gilbert (Leslie Winkle)
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ စာရေးဆရာနှင့် ဒါရိုက်တာ Sara Gilbert သည် 1997 ခုနှစ်တွင် Yale တက္ကသိုလ်မှ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ဖြင့် ဓာတ်ပုံပညာအထူးပြု အနုပညာဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ 2018 မှ 2021 ခုနှစ်အထိ သူမသည် The Conners ဟာသဇာတ်လမ်းတွဲတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်စီးရီးအမျိုးအစားကို သင်အများဆုံးကြည့်ရှုဖြစ်လဲ ? ဘာကြောင့်လဲ။ ဇာတ်လမ်းတွဲ၏ အပိုင်းများကို အလွတ်မပေးတတ်သော သင်သူငယ်ချင်းများနှင့် ဤဆောင်းပါးကို မျှဝေလိုက်ပါ။